Amazon Affiliate Marketing သည်ထိုက်တန်သလား? - Learn Expert Blogging
It is worth joining the Amazon affiliate program. Affiliate marketing through amazon is still in the top ways to earn money online. It hasahigh conversion rate than other relative programs. You can earn up to 10 percent of the commission. Amazon affiliate program provides the facility to earn commission from different countries witha“one-link” feature. You can easily earn anywhere from $100 ရန် 5000 + အလွန်နည်းပါးသောအရည်အသွေးမြင့်အသွားအလာရှိသောလစဉ်ဒေါ်လာ.
အရင်တုန်းက Amazon ရဲ့ “one-link” အင်္ဂါရပ်မရနိုင်ပါ. ဤအင်္ဂါရပ်ကိုအမေဇုံကိုယ်တိုင်တစ်နှစ်အတွင်းထည့်သွင်းခဲ့သည် 2021. အမေဇုံ၏အနာဂတ်အကြောင်းအထူးပြောရန်ရှိလျှင်၎င်းသည်သေချာသည်. အကြောင်းပြချက်မှာ၎င်းသည်အသစ်ပေါ်ထွက်လာသောကုမ္ပဏီမဟုတ်ပါ၊ သို့သော်၎င်း၏မိုးကုပ်စက်ဝိုင်းသို့ချဲ့ထွင်ခဲ့သည်7+ နိုင်ငံများ.
၎င်းသည်နိုင်ငံဧည့်သည်များကိုအကန့်အသတ်မရှိ ၀ င်ငွေရှာရန်အခွင့်အလမ်းကိုပေးသည်. ထိုအချိန်သည်သင်တစ် ဦး တည်းသာဖြစ်သည် Amazon United States အတွက်စာရင်းပေးသွင်းပါ. You got the commission of your referred product ifaperson purchased from amazon.com only. A similar case has happened with Amazon. in and amazon.co.uk and others.
Time has totally changed, you can avail more provision through geni.us. Geni.us allows you geography targeting leaving behind amazon’s “one-link” feature. Its service charges are quite decently low. When you sign up on their website. They have different pricing plans. အခြေခံကနေစပြီး. မင်းရဲ့ website traffic ပေါ်မူတည်ပြီးရွေးချယ်ဖို့ရွေးချယ်ခွင့်ရှိတယ်.
ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ပထမဆုံးတွဲဖက် ၀ က်ဘ်ဆိုက်ကိုစတင်သောအခါ, ကျွန်ုပ်သည်၎င်းကို amazon Affiliate အစီအစဉ်မှတဆင့်သာငွေရှာခဲ့သည်. အဲဒီတုန်းကငါပထဝီတည်နေရာများစွာကိုပစ်မှတ်ထားနိုင်တဲ့အင်္ဂါရပ်ကိုငါသတိမပြုမိခဲ့ဘူး. ငါ Amazon ရဲ့ ၀ င်ငွေကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ခြင်းရဲ့အသိပညာကိုငါတွေ့ခဲ့တယ်, ငါ geni.us ကိုအမြန်တက်ခဲ့တယ်. အထူးသဖြင့်, သူတို့ရဲ့စျေးနှုန်းတွေအကြောင်းပြောပြီးသူတို့က ၀ န်ဆောင်မှုကိုအရမ်းစျေးသက်သက်သာသာနဲ့ပေးနေပါတယ်.
နောက်ထပ်ပြောနေတာ, ငါကအခြားသူတွေထက်ကွဲပြားတဲ့နည်းဗျူဟာအချို့ကိုသုံးပါတယ်. amazon ရဲ့အစီအစဉ်အတွက်မ ၀ င်ခင်ငါ blog တစ်ခုလုပ်ခဲ့တယ်. မြန်ဆန်သော ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်အတူ. ငါနီးပါးအကြောင်းကိုရေးခဲ့တယ် 20 + ဆောင်းပါးများ. အဲဒီအချိန်တုန်းကငါဆောင်းပါးအသစ်တွေပုံမှန်ထုတ်ဝေရာမှာအတော်လေးတသမတ်တည်းရှိခဲ့တယ်.
ဟိုကစလာပြီ5ရန် 10 တစ်နေ့လျှင်ဧည့်သည်များ, ငါ Amazon Affiliate အစီအစဉ်ကိုချက်ချင်းလက်မှတ်ထိုးခဲ့တယ်. အောင်မြင်စွာရရှိခဲ့သည် $20 တစ်ပတ်အတွင်း. ငါကန ဦး အဆင့်မှာရှိခဲ့တယ်. ပြီးနောက်6လများ, ငါလောက်နီးနီးဘဲ 500 တစ်လဒေါ်လာ. ဒီနေ့ငါ့ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုပိတ်လိုက်ပြီလို့မဆိုလိုပါဘူး. ၎င်းသည်လည်ပတ်နေဆဲဖြစ်ပြီး ၀ င်ငွေသည်လမ်းကြောင်းနှင့်အတူဟော်ကီချောင်းကဲ့သို့ကြီးထွားနေသည်.
ရောင်းရခြင်းရဲ့နောက်ကွယ်ကအကြောင်းရင်းကဘာလဲ– ငါရောစပ်ထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုရေးနေတယ်. ၎င်းတို့အနက်အနည်းငယ်မှာစီးပွားရေးဖြစ်သည်, သတင်းအချက်အလက်ဆောင်းပါးအချို့နှင့်အခြားအချို့မှာပြဿနာဖြေရှင်းနိုင်သည်.
ငါ့ဘလော့ဂ်အများစုမှာပြဿနာဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ဆောင်းပါးတွေပါ ၀ င်ပြီးအခြားစီးပွားရေးကြော်ငြာတွေနဲ့သတင်းပေးဆောင်းပါးတွေထက်အသွားအလာပိုရခဲ့တယ်. ဘာ့ကြောင့်လဲဆိုတာမင်းသိတယ်? ငါသူတို့ကိုကူညီနေတာဘဲ.
သူတို့သည်ကျွန်ုပ်၏ website တွင်အချိန်ပိုကုန်ကြသည်. ပိုပြီးထိတွေ့ဆက်ဆံတာကိုငါတို့တွေ့ရတယ်. ဘလော့ဂ်ပို့စ်များသည် ပို၍ အထောက်အကူပြုသည်.
ထိုကာလအတွင်းကူညီပို့စ်, ကျွန်ုပ်၏ရုန်းကန်အတွေ့အကြုံနှင့်အတူ amazon ၏ထုတ်ကုန်ကိုကျွန်ုပ်အကြံပြုသည်. ဥပမာ, ငါ့ website မှာဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကိုဖတ်နေတဲ့သူတစ်ယောက်ရှိရင်အိမ်မှာရေချိုးခန်းကြွေပြားတွေကိုဘယ်လိုသန့်ရှင်းရေးလုပ်မလဲ? ဤအထူးပို့စ်တွင်, ကျွန်မရဲ့အတွေ့အကြုံအားလုံးကိုချရေးလိုက်တာပါ, ဘလော့ဂ်ပို့စ်အတွင်းငါ Amazon မှ ၀ ယ်ထားသောပစ္စည်းတစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုကိုငါအကြံပြုသည်. ငါ ၀ ယ်သူတိုင်းအတွက် Affiliate link တစ်ခုကိုတင်လိုက်တယ်, ငါကော်မရှင်တစ်ခုလက်ခံတယ်.
နိဂုံး: ယေဘုယျအား, ၎င်းသည်၎င်းတို့၏အမြင်များကိုနိုင်ငံသစ်များသို့ချဲ့ထွင်သောကြောင့်၎င်းသည် Amazon အပေါင်းအသင်းများနှင့်အလုပ်လုပ်ရသည်မှာအမှန်ပင်တန်ဖိုးရှိသည်. Amazon Affiliate အစီအစဉ်ခရီး၌အောင်မြင်ရန်သင်စီးပွားရေးနှင့်သတင်းအချက်အလက်ဆိုင်ရာဆောင်းပါးများနှင့်အတူတသမတ်တည်းပြဿနာဖြေရှင်းနိုင်သည့်အကြောင်းအရာများကိုချရေးသင့်သည်။
Previous PostAdSense နဲ့တွဲဖက်တဲ့စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကိုသင်လုပ်နိုင်သလား?